भारतमा फैलिँदै ‘ब्ल्याक फङ्गस’ राेग, २९ राज्यमा प्रकोप घोषणा निर्देशन, एकदमै घातक बन्नसक्ने | Naya News Nepal
Home स्वास्थ्य/जीवनशैली भारतमा फैलिँदै ‘ब्ल्याक फङ्गस’ राेग, २९ राज्यमा प्रकोप घोषणा निर्देशन, एकदमै घातक...
१० जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:४६
काठमान्डौ जेठ ९
भारत यो बेला कोरोना महामारी को चपेटा मा परिरहेको छ । कोरोना को महामारी बात बाहिर निस्कन नपाइ अर्को घातक रोग फैलिन सुरु गरेको छ । भारतमा ‘ब्ल्याक फङ्गस’ काे संक्रमण तीव्र भएको छ । काेराेना महामारीकाे चपेटामा रहेकाे त्यहाँ २९ राज्यमा याे राेगकाे प्रकाेप देखिएकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
हाल भारतका गुजरात र महाराष्ट्र राज्यमा यो रोगका बिरामी धेरै भेटिएकाे बताइएकाे छ । अन्य १५ वटा राज्यमा पनि यसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि भारतका २९ वटा राज्यमा प्रकोप घोषणा गर्न भनिएको छ । news24 बाट
Previous articleप्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ- अध्यादेश मार्फत बजेट आउछ
Next articleअन्य सबै बजार ओरालो लागिरहेको अबस्था मा किन बढी रहेको छ सेयर बजार ? अब देखिने बजार अबस्ता कस्तो छ सेयर बजार को ?
‘ठाकुर पक्षलाई दोस्रोपटक सोधियो स्पष्टीकरण’ जवाफ नआए पार्टीबाट निष्कासन गरिने-जसपा
सेरबहादुए देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने :